Baarlamanka Federaalka oo cod u qaadaya baarlamanka Juba * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated May 23, 2015
Mareeg.com: Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay guda-galaan u coddeynta mooshinka ka dhanka ah golaha wakiillada Maamulka KMG ee Jubba ee qaabka loo dhisay cabasho badan ka timid.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo la hadlay Warbaahinta yaa sheegay in mudanayaasha Baarlamanka ay u coddeen doonaan maanta meelmarinta ama diididda golaha wakiillada maamulka Jubba.
“Maanta oo sabti ah taariiqduna ay tahay 23’ka bisha may Barlamaanka waxa uu u coddeyn doonaa golaha wakiillada maamulka KMG ah ee jubba iyo akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeedka shaqaalaha shisheeye” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
“Sida aad ka warqabtaan kulankii lixaad ee kala fadhigii lixaad ee qabsoomay 20 tankii bishan waxaa jirtay dood ku saabsaneyd mooshinkaan oo horay loo aqriyay, maanta hadaan isbadal guddoonka Barlamaanka samayn waxaa loo codayn doonaa mooshinkaan” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
Baarlamaanka Juba oo la dhisay bishii hore ee April, uuna caleema-saarka gudoomiyihiisa Kismaayo uga qeybgalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Federaalku waxey ka geeyeen mooshin, kaasoo horay baarlamaanku uga dooday.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Ilaalada waddooyinka oo lagu dilay Muqdisho